”Waxay tirinaysaa maalmaha u harsan si ay iskaga furto!” – Trump oo gelaya xaalad xil & xaas beel ah | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxay tirinaysaa maalmaha u harsan si ay iskaga furto!” – Trump oo...
”Waxay tirinaysaa maalmaha u harsan si ay iskaga furto!” – Trump oo gelaya xaalad xil & xaas beel ah
(Washington DC) 08 Nof 2020 – MW Trump ayaa looga adkaaday doorashadii Maraykanka, waloow aanu weli aqbalin, balse waxaa la sheegayaa in Donald Trump uu sidoo kale waayi karo xaaskiisa.
Yeelkeede, Stephanie Wolkoff oo kaaliye hore u ahayd ayaa sheegtay in Melania ay ku jirtey wada xaajood gorgortan ah oo ay ku doonaysey in Barron dhaxalka Trump laga siiyo saami la eg inta kale.
Previous article”Waxaan soo celinayaa Ameerikadii ay Muslimiintu ka dhex muuqdeen” – Biden oo maalinta 1-aad qaadaya xayiraad saaran dalal ay Somalia ku jirto
Next articleWershad caanood oo albaabada loo laabay kaddib markii la arkay shaqaale caanihii ku ”qubaysanaya” + Sawirro & muuqaal